Axmed Madoobe:ciidanka dowlada ridada iyo cid alaale cidii la dagaalamaysa xarakada mujaahidiinta alshabaab waan ku garab siinayaa fagaaraha dagaalka u baneenaa. | Halganka Online
Axmed Madoobe:ciidanka dowlada ridada iyo cid alaale cidii la dagaalamaysa xarakada mujaahidiinta alshabaab waan ku garab siinayaa fagaaraha dagaalka u baneenaa.
Hogaamiyaha maleeshiyaadka shareeca diidka ah ee Kenya is ku aruursanaya Axmed Madoobe ayaa jawaab kulul ka bixiyay eedayn uga timid hogaanka sare ee Xisbul islaam Sheekh xasan daahir aweys.
Axmed Madoobe oo ku sugan gudaha Kenya ayaa qirtay in uu kulamo laqaatay Wasiiro ka tirsan xukuumada ridada ay qaraabada yihiin ah balse wuxuu beeniyay in uu heshiis buuxa lagalay Dowlada ridada uu hogaamiyo murtad shariif iyo Kenya.
Isagoo waraysi siinayay Idaacad ku taal magaalada Muqdisho ayuu Axmed madoobe dhaleeceeyay gudoomiyihiisii hore Sheykh Xasan Daahir Aweys oo hadda cadaw u ah, wuxuu sheegay in uu kulan laqaatay Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo Dhulka xukuumada ridada Max’med Cabdi Gaandi islamarkaana ay ka wadahadleen arrimo qabiil balse aysan wax Heshiis ah kala saxiixan.
way jirtaan in aan kulanay aniga iyo Wasiir ka tirsan DKMG ah ka tirsan Max’med Cabdi Gaandi iyo Odayaal beesha ah balse wax heshiis ah nama dhaxmarin, waxaan ka wadahadalnay arrimo beel ah iyo xaaladda Jubbooyinka, waan ka xumahay in Sheykh Xasan daahir si kale u fasirto kulankaasi”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe ayaan qarsan sida uu ula dhacsanyahay Dowladaha saliibiyiinta dalka ku soo duulay ee dagaalka kula jira Xarakada Shabaabul Mujaahidiin wuxuuna sheegay in uu soo dhawaynayo cid walba oo dagaal lagelaysa Shabaabul Mujaahidiin.
Wuxuu ku dhaliilay hogaanka Xisbul Islaam taageero la’aan xiligii uu dagaalka lagalay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin isagoona isku difaacay in uu muddo 7 Bilood ah kaligiis dagaal kujiray islamarkaana aysan Xisbigu wax taageera ah siin.
Ilaa iyo Octobar oo muddo 7 bilood ah aan dagaal kujirnay dhib badana na soo gaaray wax taageera ah kama hayno hogaanka Xisbiga ee aan magaciisa ku dagaalamaynay, in hadda nala eedeeyo wax wanaagsan mahan saraakiil badan ayaa xamar lagu dilay oo Barre ugu dambeeyay Xisbiguna wax kama qaban marka warka sheekh Xasan Daahir waa waxba kama jiraan” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Madoobe.
Dagaal oogahan awoodii laga qaaday ayaa ku canaantay Sheekh xasan daahir Aweys in uu is Indha tirayo wuxuuna ku adkaystay in uu heshiis lagelayo cid walba oo dagaal lagelayso Xarakada Shabaabul Mujaahidiin wuxuuna si gaar ah usoo dhaweeyay Ciidanka Dowlada ridada ah loogu Tababaray kenya oo larumaysanyahay in ay Jubbooyinka weearar ku soo yihiin.
Ugu dambayntii Axmed madoobe wuxuu sheegay in uu caleema qoyan ku soo dhawaynayo cid alaala cidii weeraraysa xataa Jubbooyinka isaguna uu booska u banaynayo, Shalay ayay Xisbul islaam Axmed Madoobe ku Tilmaameen Cadaw heshiis lagalay cadaw kale.
« Duqeymo Culus oo ay Gaysteen Saliibiyiinta AMISOM oo Dhaliye Dhimasho Iyo Dhaawac Khasaaro ka Soo Gaaray Shacabka Muslimiinta Waxaa lagusoo waramayaa in Wilaayada Islaamiga Shabeelaha Hoose ay sheegtay in ay dhaqaale iyo Ciidan uga qayb qaadanayso dagaalada ka socda Gobalada Banaadir iyo G/gaduud. »